YF Series PE, PP Uye Wood, PVC Uye Wood (Foamed) Panel Extrusion Line - China YF Series PE, PP Uye Wood, PVC Uye Wood (Foamed) Panel Extrusion Line Mutengesi, Factory -Jwell
YF Series PE, PP Uye Wood, PVC Uye Wood (Yakapupuma) Panel Extrusion Line
Iyo extruder yeiyi extrusion mutsetse ndiyo yakasarudzika yakagadzirirwa SJZ92 conical twin-screw extruder, iyi extruder yakagadzirirwa ne tembiricha yekudzora gauges iyo ine zvakanakira epamusoro chaiyo tembiricha kudzora, yakapusa uye yakavimbika mashandiro. Iyo yekugezera calibration tafura yakashongedzerwa ine yakasimba kutonhora chishandiso iyo inovimbisa iyo kutonhora mhedzisiro. Caterpillar mhando dhonza dhizaini unit, yakashongedzerwa neiyo chaiyo yekumhanyisa kumhanyisa mota mota uye inverter, ine zvakanakira zvine musoro chimiro, chine simba uye chakatsiga dhonza simba. Iyo yekucheka ine yakavimbika uye yakarurama yekucheka mhedzisiro. Iyo stacker ine inofambiswa kuisira trolley uye yakakosha yakagadzira dziviriro yerabha dziviriro kudzivirira chigadzirwa kubva mukukweshwa. Inodzika pasi zvishandiso zveiyi extrusion tambo inoshandisa iyo programmable komputa kana yepamusha yakaitwa yekudzora system kune yakagadzikana uye yakavimbika
JWZ-BMJT30 / 50/100 Ridzai richigadzirisa Machine
Yekumhanyisa mvura kutonhodza Horizontal Type Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line